Ubahlalise kabi osolwa ngokufa kukaMagaqa – Bayede News
Ubahlalise kabi osolwa ngokufa kukaMagaqa
USULALA obenyoni umndeni webhungu lakwaMbewana eHarding
by Bayede-News Posted on 2 August 2019 7 August 2019
USULALA obenyoni umndeni webhungu lakwaMbewana eHarding othi ufunwa uthuli ngowesilisa okuthiwa uthinteka emacaleni abucayi okusocongwa kosopolitiki eMzimkhulu.Phakathi kosopolitiki okuthiwa lona wesilisa ohlalise lubhojozi umndeni wakwamufi uMbewana uthinteka ekubulaweni kwabo kubalwa owayenguNobhala Wophiko lweNtsha ye-African National Congress (ANC), umufi uSindiso Magaqa nekhansela, uMduduzi Shibase abangabaseMzimkhulu.
Baningi osopolitiki namakhansela ababulawe KwaZulu- Natal ikakhulu esifundeni uMzimkhulu nokuholele ekutheni kugcine kuqokwe iKhomishini ebiholwa ngu-Adv uMorumo Moerane ebiphenya ngalezigameko zokubulawa kwabo. Isalukazi esinguMajaca Mbewana oneminyaka engama-74 ubudala esikhulume nentatheli yeBAYEDE uthe ucela noma ngubani ongavela nosizo kufakwe ingcindezi emaphoyiseni ukuze kuboshwe ngokushesha ababulali bengane yakhe okubalwa noMmeli uDlamini osonga ngokuzobaqotha bonke kwaMbewana ngoba bebavulele icala lokubulala umufi uMbewana.
UDlamini owesatshiswa okwenyoka eHarding ngenxa yezigemegeme okuthiwa uthinteka kuzona eMzimkhulu, usolwa ngokubandakanyeka ecaleni lokubulawa kwendodana kaMajaca, uGiven Mbewana. Umufi uMbewana obeneminyaka engama-29 ubudala wagcina ukubonakala ephila zingama-31 kuNhlaba wezi-2019 kade eshaywa yisixuku samadoda ayehambisana noDlamini. UMbewana ushaywa nje ubekade ethi uzama ukulamulela umngane wakhe obembozwa nguDlamini nabangane bakhe ngemuva kwengxabano eyaqubuka endaweni yokucima ukoma, iLiquor Rama eHarding.
Ngemuva kokufunwa isikhathi eside emahlathini aseduze kwaseHarding ecingwa nangezinja zamaphoyisa, isidumbu sakhe size satholakala ngemuva kwamasonto amathathu.Isidumbu sikaMbewana esitholwe sesonakele umndeni ukwaze ukusihlonza ngezingubo ayezigqokile ngosuku anyamalala ngalo kanye nezinyo legolide. UZwelabantu Mbewana ongumfowabo kamufi uMbewana, uthi isidumbu somfowabo sibonwe ngumelusi wezinkomo sintanta emfuleni wase-Ibis okuyindawo ekude naseHarding lapho eyegcinwe khona eshaywa nguDlamini nabangani bakhe.
“UDlamini nabangani ayehamba nabo ngesikhathi bephekwa ngemibuzo ngamaphoyisa bebelokhu bemi kwelokuthi bona bamgcina bemshaya eHarding wabaleka ngakho abamazi ukuthi wabaleka wabhekaphi,” kusho uMnu Zwelabantu. Uqhuba uthi: “Sixakekile uma isidumbu somfowethu sesitholakala ngakubo kaDlamini e-Ibis sitholwa ngumelusi wezinkomo sintanta emanzini, izandla ziboshwe ngezintambo zezicathulo, sikopolotwe amehlo futhi ephuke namathambo wonke umzimba okukhomba ukuthi babemcangcatha.”
Uqhuba uthi ngenxa yokuthi ekuqaleni bengumndeni bebevule icala lokunyamalala komfowabo epholisiteshi yaseHarding kuthe uma isidumbu sesitholakale, icala lase liyashintshwa kwaba ngelokubulala.“Okusiphatha kabuhlungu wukuthi amaphoyisa aseHarding= abonakala ehudula izinyawo ekubopheni abasolwa.Kuphela asitshela ukuthi abasolwa babalekile, okungelona iqiniso ngoba bahlale bebonakala bezicanasela endaweni,” kuqhuba uZwelabantu.
Uphethe ngokuthi: “Amaphoyisa asitshela ukuthi ngemuva kokutholakala kwesidumbu somfowethu ngakusasa kuphinde kwatholakala esinye somuntu obegcine engakahlonzwa sintanta. Lokhu kukhomba ukuthi baningi abantu ababulawa bajikijelwe kuwona lo mfula.”Uthi bagcine bemngcwabile umfowabo ngasekuqaleni kwale nyanga ngemuva kokuphothulwa kolibofuzo.Umphenyi wecala uKhenela uChagwe waseHarding kodwa ongathandanga ukwanda ngamaningi ngoba engagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba, ukuqinisekisile ukuthi impela sikhona esinye isidumbu esitholakale silahlwe kuwona lo mfula.
UMajaca Mbewana oseneminyaka engama-70 ubudala nongumama kamufi naye ubalisa ngokuphepha kwabo njengoba ethi basongelwa ngabasolwa abathinteka ecaleni lokubulawa kwengane yakhe.“Mtanami sikhathazekile ngokuphepha kwethu. Ubuthongo abusehli ukwesaba njengoba labafana besabonakala bezicanasela ngaphandle. Namaphoyisa ayesaba ukubabopha,” kusho uNkk uMbewana.
Uqhuba uthi: “Ngesikhathi bephenywa ngamaphoyisa aseHarding ngokunyamalala kwendodana yami, lo mfana wakwaDlamini ubelokhu ewatshela ukuthi ucela asheshise ngoba ujahe eMzimkhulu ecaleni likaMagaqa. Sisola ukuthi yikho lokhu okwenze amaphoyisa angenwa ngamanzi emadolweni,”
Ugogo uMajaca uthi sebebonga kusile ngenxa yokwesaba. “Sicela noma ngubani ongasisiza ukufaka ingcindezi emaphoyiseni ukuze ziboshwe lezinswelaboya ezibulale umtanami ngesihluku. Phela azikwazi lezinswelaboya ukubulala ingane yami ngesihluku esinjena kuvele kuthuleke nje. Umntanani bambulalise okwenja njengoba bemkopolote amehlo waphoswa emfuleni. Esingakwazi ukuthi bamphosa emfuleni esaphila yini njengoba etholakale izandla ziboshwe ngemuva ngezintambo zezicathulo,” kuzikhalela uMajaca.
UMajaca ukhala nangokuthi amaphoyisa awafuni ukubanikeza inombolo yecala.“Sesiyifune sancama inombolo yecala awafuni ukusinikeza, futhi asitshelwa lutho ngokuqhubeka kophenyo. Lokhu kwenza sisole ukuthi leli cala liyanyathelwa,” kuqhuba ugogo uMajaca.Uqhuba uthi ngoLwesihlanu kucishe kwavalwa ngehlahla emndenini wakhe uhlaselwa zinswelaboya.
“Izingane zami beziqhamuka eMzimkhulu emngcwabeni zihamba ngemoto ebishayelwa nguSthe ozalwa ngudadewethu. Kuthe sebezongena emgwaqeni obheke eHarding ngezikhathi zantambama kwathushuka imoto eyiveni elimhlophe efike yakhwela phezu kweyabo izama ukubaphosa ngale kwebhuloho,” kuqhuba Majaca Mbewana.
UMajaca uthi bebebathathu emotweni ngesikhathi behlelwa yilo mshophi.“Empeleni, umuntu ofunwa kakhulu yilezinswelaboya nguSthe ngenxa yokuthi nguyena oyilwayo le ndaba yokubulawa komzala wakhe, uGiven Mbewana,” kuqhuba ugogo uMajaca. NoNks uSthe Mhlongo ukuqinisekisile ukuthi ngempela sicishe sabondwa sayekwa emgwaqeni ngesikhathi beshayiswa yileli veni ebelivele kade libajaha.“Kucishe kwenzeka isibhicongo. Asazi sisinde kanjani.
Sibonga izinyanya noMdali osisindisile,” kusho uNks uMhlongo obezwakala ukuthi usathuthumela.Eyizeka indaba, uthi ubehamba nabazala bakhe ababili bevela emngcwabeni eMzimkhulu sebelibhekise ekhaya eHarding ngesikhathi behlelwa yilo mshophi.
“Ngiqale ukuqaphela ukuthi kunemoto eyiveni esijahayo ngesikhathi sidlula e-Ibis. Ngizamile ukugijima kodwa leli veni lize lasifica sesizoqhamukela emgwaqeni ongenela eHarding. Leli veni lishaye sengathi liyasedlula kanti umshayeli walo uhlose ukusishayisa njengoba evele wasingena ngasohlangothini lwami ngenhloso yokusiginqa ukuze siphoseke ngale kwebhuloho,” kusho uNks uMhlongo. Uthi baningi abashayeli abasibonile lesi sigameko.
“Ngizamile ukuyibamba imoto ukuba ingaphoseki ngale kwebhuloho yize ibisilimele. Sibaleke ngayo saze sayongena epholisiteshi yaseHarding sithi siyocela usizo,” kuqhuba uNks Mhlongo.Uqhubeka uthi banele bawachazela nje amaphoyisa aseHarding ukuthi basola obani kulesi sigameko avele abahlahlela amehlo athi ngeke esakwazi ukubasiza ngoba awamaningi esiteshini sawo.
“Athe kungcono sibuyele emuva siyobika emaphoyiseni ase-Ibis ngoba wona maningi kunabo. Kwale noma ngiwachazela ukuthi siyesaba ukubuyela emuva ngoba kungenzeka laba bantu ebebesijaha basicuthele endleleni.Avele athi asibone ukuthi sithubeleza kanjani wona akukho angasisiza ngakho. Sigcine sigoduke singalutholanga usizo,” kusho uNks Mhlongo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain uNqobile Gwala ukuqinisekisile ukuthi likhona icala lokubulawa kukaMbewana eliphenywa ngamaphoyisa asepholisisteshi yase-Ibis ngemuva kokutholakala kwesidumbu sikamufi ebesesonakele emfuleni waseGugwini.“Njengoba nophenyo lwamaphoyisa seluphothuliwe, idokodo selithunyelwe kuMshushisi omkhulu ukuba anqume ngalo,” kusho uCaptain Gwala.
UCaptain uGwala uthe ekuqaleni leli cala lokunyamalala kukamufi uMbewana owayegcinwe eshaywa yisixuku samadoda beliphenywa ngamaphoyisa aseHarding kodwa lagcina lishintshelwe emaphoyiseni ase-Ibis ngenxa yokuthi isidumbu sikamufi ebese sonakele sitholakale emfuleni wangakhona ngomhla we-12 kuNhlangulana 2019.UGwala uqhuba uthi mayelana nezinsolo zokwesatshiswa komndeni wakwaMbewana kuzomele wona umndeni uyobika emaphoyiseni ukuze ziphenywe.
Mayelana nesigameko sangoLwesihlanu sokushayiswa kwemoto kaNks uMhlongo, uCaptain Gwala uphendule kanje: “Mayelana nesigameko sakamuva, akukho okwamanje osekubikwe ngaso emaphoyiseni,” kusho yena ephetha inkulumo.